Inona no Nataon’i Jehovah mba Hifandraisana Akaiky Amintsika?—Jak. 4:8
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mooré Ndebele Ndonga Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
INONA NO TSAPANAO REHEFA MIERITRERITRA HOE...
manasa anao hifandray akaiky aminy i Jehovah?
nanome anao ny sorom-panavotana Andriamanitra?
nataon’i Jehovah izay hahazoanao tsara an’izay voasoratra ao amin’ny Teniny?
1. Inona no ilain’ny olombelona, ary iza avy no azony ifandraisana?
TENA mila mifandray akaiky amin’ny hafa ny olombelona. Ny olona mifankatia be sy mifankahalala tsara no atao hoe mifandray akaiky. Sambatra tokoa isika rehefa tian’ny fianakaviantsika sy ny namantsika sady sarobidy amin’izy ireo, ary mahatsapa fa takany ny fihetseham-pontsika sy ny fomba fihevitsika. Ilay Mpamorona Be Voninahitra anefa no tokony hataontsika namana akaiky indrindra.—Mpito. 12:1.
2. Inona no ampanantenain’i Jehovah antsika, ary nahoana ny olona maro no tsy mino an’izany?
2 Mampirisika antsika ‘hanatona’ azy i Jehovah sady mampanantena fa raha manao izany isika dia ‘hanatona antsika’ izy. (Jak. 4:8) Mampahery tokoa izany! Maro anefa no tsy mino hoe te hifandray akaiky amintsika Andriamanitra. Mihevi-tena ho tsy mendrika ny hifandray amin’Andriamanitra izy ireny, na mieritreritra fa lavitra loatra Andriamanitra ka tsy afaka mifandray akaiky aminy isika. Afaka ny ho akaiky an’i Jehovah tokoa ve isika?
3. Inona no tokony ho fantatsika momba an’i Jehovah?
3 “Tsy lavitra” an’izay rehetra mitady azy i Jehovah. Azo atao tokoa ny mahalala azy. (Vakio ny Asan’ny Apostoly 17:26, 27; Salamo 145:18.) Tian’Andriamanitra hifandray aminy ny olombelona na dia tsy lavorary aza. Vonona handray antsika ho namany akaiky izy. (Isaia 41:8; 55:6) Nahatsapa an’izany ny mpanao salamo, ka hoy izy momba an’i Jehovah: “Ry Mpihaino vavaka ô, ianao no hohatonin’ny karazan’olona rehetra. Sambatra izay fidinao sy ampanatoninao.” (Sal. 65:2, 4) Hodinihintsika izao ny tantaran’i Asa mpanjakan’ny Joda. Ho hitantsika izay nataony mba hifandraisana akaiky tamin’i Jehovah, sy izay nataon’i Jehovah ho setrin’izany. *
MANDRAISA LESONA AVY AMIN’I ASA MPANJAKA
4. Inona no modely nomen’i Asa Mpanjaka ho an’ny vahoakan’ny Joda?
4 Nafana fo be tamin’ny fivavahana marina i Asa Mpanjaka. Nofoanany ny fanompoan-tsampy sy ny fivarotan-tena tao amin’ny tempoly, izay lasa nahazo vahana tao amin’ilay tany. (1 Mpanj. 15:9-13) Nampirisika ny vahoaka i Asa mba “hitady an’i Jehovah Andriamanitry ny razany, sy hankatò ny lalàna sy ny didy”, ary nanome modely izy. Nataon’i Jehovah milamina tanteraka àry ny tany nandritra ny folo taona voalohany nanjakan’i Asa. Iza no nolazain’i Asa fa nahatonga an’ilay fiadanana? Hoy izy tamin’ny vahoaka: “Mbola malalaka ny tany ka azontsika ampiasaina tsara, satria isika efa nitady an’i Jehovah Andriamanitsika. Eny, efa nitady azy isika, ka nataony mandry feizay eo anivon’ny fahavalontsika rehetra manodidina.” (2 Tan. 14:1-7) Diniho izay nitranga taorian’izay.
5. Inona no olana natrehin’i Asa Mpanjaka, ary inona no vokany rehefa nitoky tamin’i Jehovah izy?
5 Aoka hatao hoe i Asa Mpanjaka ianao. Tonga hanafika an’i Joda i Zera Etiopianina sy ny lehilahy 1 000 000 ary ny kalesy 300. (2 Tan. 14:8-10) Inona no ho tsapanao rehefa tazanao ireo miaramila maro be miditra ao amin’ny faritaninao? Ny miaramilanao amin’io 580 000 monja, izany hoe tokotokony ho antsasak’izy ireo. Hieritreritra ve ianao hoe nahoana i Jehovah no mamela azy ireo hanafika? Hanao izay hitanao fa mety fotsiny ve ianao, mba hiatrehana an’izany loza mitatao izany? Hita tamin’izay nataon’i Asa fa natoky an’i Jehovah sy nifandray akaiky taminy izy. Nitalaho izy hoe: “Ampio izahay, ry Jehovah Andriamanitray ô, fa ianao no ianteheranay, ary amin’ny anaranao no ahatongavanay eto hiady amin’io vahoaka io. Jehovah ô, ianao no Andriamanitray! Aza avela handresy anao ny olombelona mety maty.” Inona àry no nataon’i Jehovah? ‘Nataony resy ny Etiopianina’, ka tsy nisy niangana na iray aza.—2 Tan. 14:11-13.
6. Inona no nataon’i Asa ka tokony hataontsika koa?
6 Nahoana i Asa no natoky tanteraka fa hitari-dalana sy hiaro azy Andriamanitra? Satria “nanao izay mahitsy teo imason’i Jehovah i Asa” ary ‘nifikitra tanteraka tamin’i Jehovah ny fony.’ (1 Mpanj. 15:11, 14) Mila manompo an’i Jehovah amin’ny fo manontolo koa isika. Tena ilaina izany raha te hifandray akaiky aminy isika dieny izao sy amin’ny hoavy. Tena misaotra an’i Jehovah isika satria nanao zavatra izy mba hahafahantsika hanatona azy sy hifandray akaiky aminy foana. Diniho ny fomba roa nanaovany an’izany.
NANOME NY VIDIM-PANAVOTANA I JEHOVAH
7. a) Inona avy no nataon’i Jehovah mba hanampiana antsika hanatona azy? b) Inona no fomba lehibe indrindra nanampian’Andriamanitra antsika hanatona azy?
7 Tena tia antsika olombelona i Jehovah matoa namorona tany tsara tarehy ho fonenantsika. Hita hoe mbola tia antsika koa izy, satria omeny zavatra tena tsara isika mba hahavelona antsika foana. (Asa. 17:28; Apok. 4:11) Mbola zava-dehibe noho izany aza fa mikarakara antsika eo amin’ny ara-panahy izy. (Lioka 12:42) Omeny toky koa isika fa izy no mihaino antsika rehefa mivavaka isika. (1 Jaona 5:14) Tsy izay ihany fa nanome ny vidim-panavotana izy, ary porofon’ny fitiavany izy io. Izy io no fomba lehibe indrindra anampiany antsika hanatona azy, sady mahatonga antsika haniry hifandray akaiky aminy. (Vakio ny 1 Jaona 4:9, 10, 19.) Naniraka ny “Zanany lahitokana” ho etỳ an-tany i Jehovah mba hanafahana antsika amin’ny ota sy ny fahafatesana.—Jaona 3:16.
8, 9. Inona no nataon’i Jesosy mba hanatanterahana ny fikasan’i Jehovah?
8 Na ny olona niaina talohan’i Kristy aza efa nampian’i Jehovah handray soa amin’ny vidim-panavotana. Vao naminany i Jehovah fa hisy Mpamonjy hanavotra ny olombelona, dia noheveriny ho toy ny efa voaloa ilay vidim-panavotana. (Gen. 3:15) Fantany mantsy fa tsy maintsy ho tanteraka izay kasainy. Nisaotra an’i Jehovah ny apostoly Paoly, taonjato maro tatỳ aoriana, noho i Jehovah nanome an’ilay “fanafahana nentin’ny vidim-panavotana naloan’i Kristy Jesosy.” Nilaza koa i Paoly fa “naneho fandeferana” Andriamanitra, ka “namela ny fahotana fahiny.” (Rom. 3:21-26) Lehibe tokoa ny zavatra nataon’i Jesosy mba hifandraisantsika akaiky amin’Andriamanitra!
9 Tsy afaka ny hahalala an’i Jehovah sy hifandray akaiky aminy ny olona manetry tena, raha tsy amin’ny alalan’i Jesosy. Hoy mantsy ny Soratra Masina: ‘Andriamanitra naneho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty ho antsika i Kristy.’ (Rom. 5:6-8) Nanome ny sorom-panavotana i Jehovah sy Jesosy satria tena tia antsika, fa tsy hoe satria tena mendrika an’izany isika. Hoy i Jesosy: “Tsy misy mahay manatona ahy raha tsy taomin’ny Ray izay naniraka ahy.” Hoy koa izy: “Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako.” (Jaona 6:44; 14:6) Mampiasa ny fanahy masina i Jehovah mba hitaomana ny olona hanatona azy, amin’ny alalan’i Jesosy. Mampiasa an’io fanahy io koa izy mba hanampiana azy ireo hitoetra ao amin’ny fitiavany, ka hanantena hiaina mandrakizay. (Vakio ny Joda 20, 21.) Misy fomba hafa koa anampian’i Jehovah antsika hifandray akaiky aminy.
NANOME NY BAIBOLY I JEHOVAH
10. Inona no voalazan’ny Baiboly ka manampy antsika hifandray akaiky kokoa amin’Andriamanitra?
10 Nampiasa andinin-teny avy amin’ny boky 14 ao amin’ny Baiboly isika hatreto. Raha tsy nisy ny Baiboly, ahoana moa no hahalalantsika hoe afaka mifandray akaiky amin’ny Mpamorona isika? Ahoana koa no hahafantarantsika momba ny vidim-panavotana sy ny hoe manampy antsika hifandray amin’i Jehovah i Jesosy? Nampiasa ny fanahy masina i Jehovah mba hampanoratana ny Baiboly, ary resahina ao ireo toetrany mahafinaritra sy ny fikasany. Nilaza tamin’i Mosesy, ohatra, i Jehovah ao amin’ny Eksodosy 34:6, 7 fa “Andriamanitra mamindra fo sy tsara fanahy” izy, “tsy mora tezitra, be hatsaram-panahy feno fitiavana sady tena tia fahamarinana, mitahiry hatsaram-panahy feno fitiavana ho an’ny taranaka an’arivony”, ary “mamela fahadisoana sy heloka ary fahotana.” Iza no tsy te ho naman’ny olona toy izany? Fantatr’i Jehovah fa rehefa mianatra bebe kokoa momba azy ao amin’ny Baiboly isika, dia vao mainka tena hino hoe misy izy ka lasa hifandray akaiky kokoa aminy.
11. Nahoana isika no tokony hiezaka hianatra momba ny toetran’i Jehovah sy ny fomba fanaovany zavatra? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
11 Manampy antsika hahalala izay tokony hatao mba hifandraisana akaiky amin’Andriamanitra ny sasin-tenin’ny boky Manatòna An’i Jehovah. Hoy ilay boky: “Ilaina, mba hahazoana namana, ny fahafantarana an’ilay olona sy ny fitiavana azy ary ny fanekena fa sarobidy ny toetrany. Tena tokony hianarana àry ny toetra sy fomban’Andriamanitra hita ao amin’ny Baiboly.” Tena misaotra an’i Jehovah isika satria nataony azon’ny olombelona ny zavatra nasainy nosoratana ao amin’ny Teniny.
12. Nahoana i Jehovah no nampiasa olombelona mba hanoratra ny Baiboly?
12 Azon’i Jehovah nampanoratina ny anjely ny Baiboly. Tena mahaliana azy ireo mantsy ny momba antsika sy izay ataontsika. (1 Pet. 1:12) Azo antoka fa afaka nanoratra ny hafatr’Andriamanitra ho an’ny olombelona izy ireo. Ho tsapan’izy ireo ve anefa izay ilaintsika sy ny fahalementsika ary izay mba vetsovetsom-pontsika? Tsy hahatsapa an’izany ny anjely, ary fantatr’i Jehovah izany. Olona no nampanoratiny ny Baiboly, satria tiany ho tsapantsika hoe tena natao ho antsika izy io. Afaka mahatakatra ny fomba fihevitra sy ny fihetseham-pon’ireo mpanoratra Baiboly sy ny olon-kafa voaresaka ao isika. Afaka miombom-pihetseham-po amin’izy ireny isika rehefa kivy izy, na nisalasala, na natahotra, na nanao fahadisoana, na faly sy nahavita zavatra tsara. Toa an’i Elia mpaminany, dia “nanana fihetseham-po toa antsika” ireo mpanoratra Baiboly rehetra.—Jak. 5:17.
Nahoana no mahatonga anao hifandray akaiky kokoa amin’i Jehovah ny fifandraisany tamin’i Jona sy Petera? (Fehintsoratra 13, 15)
13. Inona no tsapanao rehefa mamaky ny vavak’i Jona?
13 Eritrereto, ohatra, hoe anjely no nasaina nanoratra ny tantaran’i Jona. Ho hainy ve ny hampita tsara ny fihetseham-pon’io mpaminany io rehefa nirahin’Andriamanitra izy nefa nandositra? Tsara kokoa anefa ilay tantara satria i Jona mihitsy no nasain’i Jehovah nanoratra an’ilay izy, anisan’izany ilay vavaka fitalahoany tamin’izy tany amin’ny ranomasina lalina be. Hoy i Jona: “Rehefa reraka be ny aiko tato anatiko, dia i Jehovah no tsaroako.”—Jona 1:3, 10; 2:1-9.
14. Nahoana ianao no afaka mahatsapa an’izay nosoratan’i Isaia?
14 Diniho koa izay nasain’i Jehovah nosoratan’i Isaia mpaminany. Nahazo fahitana momba ny voninahitr’Andriamanitra izy, ka niaiky fa mpanota. Hoy i Isaia: “Lozako! Maty aho fa olona maloto molotra, sady mitoetra eo amin’ny vahoaka maloto molotra, nefa izaho nahita an’ilay Mpanjaka, dia i Jehovah Tompon’ny tafika.” (Isaia 6:5) Anjely iza no hanana fihetseham-po toy izany ka ho afaka hilaza an’ireo teny ireo? Afaka nilaza an’ireo teny ireo anefa i Isaia, ary takatsika ny fihetseham-pony satria tsy lavorary toa azy isika.
15, 16. a) Nahoana isika no mahatsapa ny zavatra tsapan’ny olon-kafa? Manomeza ohatra. b) Inona no hanampy antsika hifandray akaiky kokoa amin’i Jehovah?
15 Ho afaka hiteny toa an’i Jakoba ve ny anjely hoe “tsy mendrika” ny tenany, na hahatsapa hoe “mpanota” toa an’i Petera? (Gen. 32:10; Lioka 5:8) Mety ‘hatahotra’ toa an’ireo mpianatr’i Jesosy ve izy ireny? Tsy mila ‘misikina herim-po’ toa an’i Paoly sy ny hafa koa ny anjely, raha enjehina noho ny fitoriana ny vaovao tsara. (Jaona 6:19; 1 Tes. 2:2) Lavorary izy ireny ary mahery noho ny olona. Olombelona tsy lavorary kosa anefa no nanoratra an’ireo fihetseham-po ireo, ka tonga dia tsapantsika izay tsapany. Toa azy ireo ihany mantsy isika. Tena afaka ‘miara-mifaly sy miara-mitomany’ amin’izy ireo isika, rehefa mamaky ny Tenin’Andriamanitra.—Rom. 12:15.
16 Saintsaino ny fifandraisan’i Jehovah tamin’ny mpanompony tsy mivadika fahiny, araka ny hita ao amin’ny Baiboly. Ho hitantsika amin’izany fa nifandray akaiky tamin’ireny olona tsy lavorary ireny izy, ary nanam-paharetana sy be fitiavana tamin’izy ireny. Hanjary hahalala tsara an’i Jehovah isika raha misaintsaina toy izany ary ho tena tia azy, ka hifandray akaiky kokoa aminy.—Vakio ny Salamo 25:14.
ATAOVY NAMANAO MANDRAKIZAY I JEHOVAH
17. a) Inona no torohevitra tsara nomen’i Azaria an’i Asa? b) Inona no nataon’i Asa noho izy tsy niraharaha ny torohevitr’i Azaria, ary inona no vokany?
17 Nahazo fandresena miezinezina i Asa Mpanjaka rehefa niady tamin’ny tafika etiopianina. Nanome azy sy ny vahoakany an’izao torohevitra feno fahendrena izao i Azaria mpaminany, taorian’izay: “Momba anareo foana i Jehovah, raha momba azy ianareo. Ary raha mitady azy ianareo, dia hataony izay hahitanareo azy, fa raha mahafoy azy kosa, dia hafoiny koa.” (2 Tan. 15:1, 2) Tsy nanaraka an’io torohevitra tsara io i Asa tatỳ aoriana. Nitady fanampiana tamin’ny Syrianina izy, rehefa nandrahona hanafika azy ny fanjakan’ny Israely tany avaratra. Nanao fifanekena tamin’ny mpanompo sampy izy, fa tsy mba nitady vonjy tamin’i Jehovah. Hoy i Jehovah taminy: “Hadalana mihitsy izany nataonao izany, ka hisy hiady aminao foana manomboka izao.” Nisy ady foana àry nandritra ireo taona sisa nanjakan’i Asa. (2 Tan. 16:1-9) Inona no ianarantsika avy amin’izany?
18, 19. a) Inona no tokony hataontsika raha efa somary nanalavitra an’i Jehovah isika? b) Inona no hanampy antsika hifandray akaiky kokoa amin’i Jehovah?
18 Tsy tokony hiala amin’i Jehovah mihitsy isika. Ary ahoana raha efa somary nanalavitra azy isika? Tokony hanaraka an’ity voalazan’ny Hosea 12:6 ity isika: “Miverena amin’Andriamanitrao, ka manehoa hatsaram-panahy feno fitiavana ary manaova ny rariny. Aoka koa ianao hanantena foana an’Andriamanitrao.” Miezaha àry hifandray akaiky kokoa amin’i Jehovah hatrany. Hahavita izany ianao raha misaintsaina sy mankasitraka ny vidim-panavotana sady mazoto mianatra ny Teniny.—Vakio ny Deoteronomia 13:4.
19 Hoy ny mpanao salamo: “Ny manakaiky an’Andriamanitra no tsara amiko.” (Sal. 73:28) Enga anie isika rehetra hianatra zava-baovao momba an’i Jehovah foana. Vao mainka ho tia azy isika amin’izay. Ary enga anie i Jehovah ka hifandray akaiky kokoa amintsika foana, dieny izao sy ho mandrakizay!
^ feh. 3 Jereo ilay lahatsoratra momba an’i Asa ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Aogositra 2012, mitondra ny lohateny hoe “Handray Valisoa Ianareo Amin’izay Ataonareo.”